Kedu ihe bụ akụkụ pelvic na otu esi ewusi ya ike | Bezzia
Nke Torres | 13/10/2021 23:55 | Ndụmọdụ gbasara ahụike
A na -ekwu ọtụtụ ihe gbasara ala pelvic mgbe ọ na -abịakwute ụmụ nwanyị bụ nne, mana obere ihe ekwuru gbasara mkpa ọ dị iwusi akụkụ ahụ a ike. Ụmụ nwanyị niile, na -enweghị ihe dị iche, kwesịrị ịrụ ọrụ na ala pelvic ha ọbụlagodi na ha adịghị ime ime. N'ihi na mọzụlụ dị na mpaghara a na -adalata ka oge na -aga ma ọ bụ ya bụ isi ihe na -ebute nsogbu dịka mwụpụ mmamịrị.
Ala pelvic bụ ebe akwara na akwara dị achọtara na akụkụ ala nke oghere afọ. Ndị a nwere ọrụ dị oke mkpa, ebe ọ bụ ha na -ahụ maka ịkwado akụkụ pelvic, dịka eriri afo na urethra, ikpu, akpanwa na ikensi. Ka akụkụ ahụ ndị a wee na -arụ ọrụ nke ọma, a ga -edobe ha n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị ma maka nke a bụ akwara pelvic n'ala.
Mgbe ala pelvic na -ebelata, ihe na -eme maka ihe dị iche iche, ọ na -agba ọsọ ihe ize ndụ nke ịta ahụhụ, n'etiti ndị ọzọ, mwepụ mmamịrị, enweghị mmekorita nwoke na nwanyị, mgbada ma ọ bụ mgbu azụ dị ala. Yabụ na ọ dị ezigbo mkpa ilekọta, chekwaa ma mee ka akụkụ pelvic sie ike ka nke a ghara ime.
1 Kedu ka m ga -esi mara ma m nwere ala pelvic na -adịghị ike?
1.1 Otu esi eme ka okpuru pelvic sikwuo ike
Kedu ka m ga -esi mara ma m nwere ala pelvic na -adịghị ike?
Ọ bụrụ na ị mebie akwara pelvic na ligaments, ị nwere ike ịta ahụhụ site na mgbaàmà dị iche iche dị ka enweghị mmamịrị. Ihe mara mma ma dịkwa mfe ịhụ bụ nke ahụ ị nweghị ike ijikwa mgbapụta mmamịrịỌbụnadị mgbe ụkwara, ima elu ma ọ bụ ịchị ọchị, ị nwere ike nwetatụ ntakịrị, nke bụ akara doro anya nke ala pelvic na -esighị ike.
Mgbaàmà ndị ọzọ nke ị ga -amata na nsogbu ala pelvic bụ mgbu mgbe ị na -enwe mmekọahụ, mgbu azụ dị ala na ọbụnadị mgbada, nke bụ mwepụ nke akụkụ ahụ uru ahụ na -akwado, dị ka ike. Mgbaàmà ndị a bụ nke kacha njọ, yabụ na ị kwesịghị ikwe ka oge gafere ma na obere mgbaàmà, gakwuru dọkịta gị ka ọ mata ọnọdụ ala pelvic gị.
Otu esi eme ka okpuru pelvic sikwuo ike
Iji mee ka ala pelvic sie ike, enwere ike iji ọtụtụ ụdị ọgwụgwọ. Nhọrọ nke mbụ ma ọ bụrụ na ị na -ata ahụhụ site na nnukwu nsogbu bụ ka ị nweta nlekọta ahụike pụrụ iche n'okwu a. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịta ahụhụ ọzọ na -agbalị idozi nsogbu ahụ n'onwe gị. N'okwu ndị dị nwayọ na ọbụlagodi dịka ihe mgbochi, enwere uzo ozo dika nke a.
Mmega ahụ Kegel: A na -eme ụdị mmega ahụ a ka ọ rụọ akwara akwara pelvic, nke mere na ha na -agbasi ike dịka a na -arụ ọrụ akwara ndị ọzọ dị n'ahụ. Maka mmega ahụ Kegel enwere ike iji ngwaọrụ dịka bọọlụ ndị China ma ọ bụ onye na -emega ahụ Kegel. Site na mmemme ndị a, ị nwere ike belata akwara gị ma melite ọrụ pelvic n'ala.
Yoga: ụfọdụ yoga ma ọ bụ asanas zuru oke maka ịrụ ọrụ pelvic. Kpọtụrụ onye ọkachamara ka ịchọta mmega ahụ kachasị mma maka okwu gị. Ebe ọ bụ na -arụ ọrụ pelvic n'ala ọ bụrụ na emebighị ya, ọ nwere ike ghara ịmị mkpụrụ.
Mmega mmetụta dị ala: onye ọ bụla nke na -apụtaghị mmetụta na ahụ, nke na -agụnyeghị ịwụ elu, ma ọ bụ mmegharị mberede. Egwuregwu kacha mma maka ụmụ nwanyị na nke a bụ igwu mmiri, ịgba ịnyịnya, ịga ije, ma ọ bụ ịnya elliptical.
Ọ dịkwa oke mkpa iburu n'uche ụfọdụ mgbochi. Otu esi edobe ịdị arọ dị mma, na -emega ahụ mgbe niile, nwee ezigbo ụlọ mposi, rie nri nwere eriri iji nwee ezigbo ụzọ eriri afọ, nwee ezigbo ọnọdụ ọkachasị mgbe ị na-anọdụ ala ma na-eme ihe ndị nwere mmetụta dị ala.
E nwere ihe ndị nwere ike ibute ọrịa nke nwere ike imebi ala pelvic, dị ka ịmụ nwa, afọ ime, oke ibu, ime egwuregwu nwere mmetụta dị elu, afọ ntachi na-adịghị ala ala, ọrịa iku ume ma ọ bụ ịwa ahụ ma ọ bụ ọgwụgwọ ọrịa ụmụ nwanyị. Mgbochi bụ ihe kachasị mma megide nsogbu nwere ike bute ọgbaghara kwa ụbọchị. Kpọtụrụ dọkịta gị wee chọta ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu a tupu ọ dị njọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ndụmọdụ gbasara ahụike » Kedu ihe bụ akụkụ pelvic na otu esi ewusi ya ike